ဦးခိုက်ပူဇော် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်နှင့် မန္တလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဦးခိုက်ပူဇော် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်နှင့် မန္တလေး
ဦးခိုက်ပူဇော် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်နှင့် မန္တလေး
Posted by mandalarthu on Dec 11, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
***** ဦးခိုက်ပူဇော် တရုပ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် *******
(၈-၁၂-၂၀၁၁) နေ့ က နေ့ လည်ခင်းပိုင်းခန့်တွင် ကျွန်မတို့ မန္တလေးမြို့ သို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်သည်၇န်ကုန်မြို့ မှကြွရောက်တော် မူလာခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပြီးခဲ့ သော အောက်တို ဘာလ(၁၂)၇က်နေ့မှာ နေပြည်တော်ေ၇ာက်ခိုက် ဖူးခွင့် ကြုံ၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို ဥပ္ပါတသန္တိစေတီဂန္ဓကုဋိ လိုဏ်တော်မှာ ကျွန်မ ဖူးမြော် ခွင့် ရရှိခဲ့ ရာ ယခု နဲ့ ပါဆိုလျှင် (၂)နေရာမှာ (၂)ကြိမ်ထက်မနည်း ဖူးခွင့် ၇၍နှစ်ထောင်းအားရ ကုသိူလ်စိတ်ဖြင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိသည်မှာ ပြောမပြတတ်အောင် ပင်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အား ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဒေသစာရီ ပင့် ဆောင် ပူဇော်ခဲ့ သည်မှာ ယခု အကြိမ်နှင့် ပါဆိုလျှင် (၄)ကြိမ် တိုင် ၇ှိခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
(က) ပထမအကြိမ် (၁၅-၁၀-၁၉၅၅ မှ ၈-၆-၁၉၅၆) ထိ (၈) လ
(ခ)ဒုတ်ိယအကြိမ် (၂၀-၄-၁၉၉၄ မှ ၈-၆-၁၉၉၄) ထိ (၄၅) ရက်
(ဂ)တတိယအကြိမ် (၆-၁၂-၁၉၉၆ မှ ၅-၃-၁၉၉၇) ထိ (၉၀) ရက် နှင့် 
( ဃ )စတုတ္ထအကြိမ် (၆-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၁)ထိ (၄၈)ရက် တိုင်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ အပေါင်း စိတ်ချမ်းမြေ့ စွာ ဖူးမြော်ကြည်ညို နို်င်ရေးအတွက် အပူဇော်ခံထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အကြိမ် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်
(၁)နေပြည်တော်၌ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီဂန္ဓကုဋို လိုဏ်တော်မှာ(၆-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၁-၁၁-၂၀၁၁) ထိ (၁၆ ရက် )
(၂)ရန်ကုန်မြို့ က မ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏ ဂန္ဓကုဋိလိုဏ်တော် မှာ(၂၂-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၇-၁၂-၂၀၁၁)ထိ
(၁၆ ရက်)နှင့်
(၃)မန္တလေးမြို့ မဟာအတုလဝေယံ(အတု မရှိ)ကျောင်းတော် မှာ(၈-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၁)ထိ(၁၆ ရက)်
တင့် တယ် သ ပ္ပာယ်စွာ ကြည် ညို အပူဇော်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
****ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကြွေ၇ာက်သီတင်းသုံးအပူဇော်ခံထားရှိရာ မန္တလေးမြို့ မဟာအတုလဝေယံ(အတု မရှိ)ကျောင်းတော်***
မနေ့က(၉-၁၂-၂၀၁၁)့ နံနက်ပိုင်း (၁၁)နာရီ ခန့် တွင် ကျွန်မ သူငယ်ချုင်းများနှင့် အတူ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကြွေ၇ာက်သီတင်းသုံးအပူဇော်ခံထားရှိရာ မဟာအတုလဝေယံ(အတု မရှိ)ကျောင်းတော်ကြီးသို့ ချီတက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဘက်မှာ ကျွှန်မတို့ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ် များကို ဘု၇ားဖူးလာသူများအတွက် စနစ်တကျ အခမဲ့ အအပ်ခံ၍ စန္ဒာမုခိ ဘုရားေ၇ှ့ မှာ ကားများကို စနစ်တကျ ထားရှိရပါတယ်။
****** ကုသိုလ်တော်ေ၇ှ့ ၇ှိ ကန်ရေပြင် ကို ဖြတ်၍ လှမ်းမြင်၇သော ဘုရားဖူးလာ ယာဉ်များ *********
*********ကုသိုလ်တော်ဘုရားေ၇ှ့ ရှိ ဘုရားဖူးများ အခမဲ့အပ်နှံ၇ာ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် များ ***************
*** *မြတ်စွယ်တော်ကို ကြိုဆိုနေကြသော ကုသိုလ်တော် ဘုရားေ၇ှ့ ရှိေ၇ာင်စုံ လှပ ကြာပန်းကလေးများ****
***** မြတ်စွယ်တော်သို့ဖူးမြော်၇န် လျှောက်လှမ်း အ၀င် လမ်းကလေး********
****** လမ်းဘေး ၀ဲယာ တလျှောက် စွယ်တေိာ ပုံေ၇ာင်းချနေကြသော လက်ပွေ့ ဈေးသည်များ ********
ထို့ နောက် ခြေလျှင်လျှောက် ကာ ဘုရားဖူးများစီတန်းဝင်ေ၇ာက်ရာနေ၇ာဆီသို့လျှောက်လှမ်းခဲ့ ကြပါတယ်၊်၊ မန္တလေးမှာ(နေပြည်တော်နှင့် မတူ) တမူထူးခြားတာ ကတော့ လမ်းဘေးဝဲယာ တလျှောက်
စွယ်တော်မြတ်ဘုရားဧ။်ပုံတော်များကို ဘုရားဖူးလာသူ အပေါင်း ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ဖြင့် ဝယ်ယူပူဇော်နိုင်ခြင်းပင်။စွယ်တော်ပုံတော်များမှာ အားလုံးပလတ်စတစ်လောင်းထား၍ ဆေးသားစိုစို နှင့် သပ်သပ်၇ပ်၇ပ်ပင်။
*********** ဆေးသားစိုစို့ ဈေးချိုချို ၀ယ်ယူရရှိ နိုင်သော စွယ်တော်ပုံများ *************
********အ၀င်ဝ တွင် တန်းစီနေကြသော ဘုရားဖူးများ *******
*** ဘုရားဖူးများ အားလုံးလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ***
ထိုနေရာမှစ၍ ကျွန်မတို့ အားလုံးကို
လှုဒါန်းလို သော ငွေ ကြေးမှ လွဲ၍ ဖောင်တိန်၊ကင်မ၇ာ၊ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဖုန်း စသည့် အခြား မည်သည့် ပစ္စည်းမှ ယူဆောင်ခွင့် မပြုပါ။ကင်မ၇ာယူခွင့် မရသောကြောင့်အတွင်းမှာမည်သည့်ပုံ မှရိုက်ခွင့် မရခဲ့ ပါ။ကျွန်မတို့ လည်း သူငယ်ချင်း(၂)ယောက်ကို ပစ္စည်းများနှင့် ထွက်ပေါက်တွင် အစောင့် ထားခဲ့ ပြီး နောက် တလှည့် စီ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍
လျှောက်လမ်းကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်လိုင်းခွဲထား၍ ဘုရားအ၀င်ဝတွင် သေချာစစ်ဆေးခံပြီးမှ ၀င်ေ၇ာက်ကြရပါတယ်။
အတု မရှိ ကျောင်းဝင်းကျယ်ကြီး အတွင်းမှာတော့ တာဝန်ကျသူ အသီးသီးက တက်တက်ကြွကြွ ဖြင့် ကျရာတာဝန်အသီးသီးကို ထမ်းဆောင်နေကြသည်မှာ မမောနိုင် မပန်းနိုင်။ကြည်နူးစရာပင်။
အလှူခံဌာနမှာလည်း ဘုရားဖူးလာေ၇ာက် လှူဒါန်းသူများက ကြိတ်ကြိတ်တိုး။အံ့ ချီးစရာ မြန်မာတို့ ဧ။်သဒ္ဒါတရားပါပေ။ကျွန်မတို့ လှူဒါန်းအပြီးတွင် ဖြတ်ပိုင်းနှင့် အတူ (ဓမ္မဒါန) တ၇ုပ်ပြည် စွယ်တော်ဘုရားရှိခိုးဂါထာစာရွက်လေးနှင့် စွယ်တော်ပုံသေးလေးတပုံပေးပါသည်။
****** အလှူခံဌာနမှ ဓမ္မဒါန အဖြစ် လက်ဆောင်ပေးသော စွယ်တော် ပုံ **********
အ၀င်ဝ မှာ လှေကားကို မတက်နိူင်ရှာသော အဖွားအိုနှစ်ယောက်ကို ပွေ့ ချီခေါ်ပေးနေသော တာဝန်ကျ ၀တ်စုံဝတ်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်နှင့် တိုး၍လမ်းဖယ်ပေးရင်း ကြည်နူးစွာ သာဓုခေါ်မိသေးသည်။ အပေါ်ေ၇ာက်တော့ ထိုအဖွားအို နှစ်ယောက် အတွက် ၀ှီးချဲ နှစ်စီး ကို တွန်း၍အပြေးလာပေးနေသော
နောက်ထပ်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့ လိုက်ရသည်။တာဝန်အ၇ မဟုတ်ဘဲ စေတနာအပြည့် ထားကာ
တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နေပုံက မျက်နှာပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှား။၇င်ထဲ လှိုက်ခနဲ ကြည်နူးမိပါတယ်။
စွယ်တော်မြတ်စံပယ်ရာ ခမ်းမထဲေ၇ာက်ပါပြီ။၀င်လျှင်ဝင်ချင်းဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်ဘုရားကို ပူဇော်သောတ၇ားတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသော အမျိုးသမီးတဦးဧ။် သာယာနာပျော်ဖွယ်အသံကို ကြားရသည်မှာ လည်းဝမ်းမြောက် ပီတိဖြစ် စရာပင်။
ကြီးကျယ်ခမ်းနားသပ္ပါယ်စွာ ပူဇော်ထားသော မြတ်စွယ်တော် ထံအာရုံညွှတ်ကာ တေ၇ွ့ ရွေ့ လျှောက်လှမ်းလာရင်း မြတ်ဗုဒ္ဓဧ။် သရီ၇ဓာတ်တော်ဖြစ်သော အထက်လက်ဝဲစွယ်တော်မြတ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြည်ညိုစွာ ဖူးတွေ့ ရပါသောအခိုက်မှာတော့ 
စိတ်တွင် ၀မ်းသာကြည်နူးပီိတိလှိုင်းများ တငြိမ့် ငြီမ့် ဖြင့် ဘုရားရှင် ကိုယ်စား ဖူးတွေ့ ရသလိုဖြစ်၍
ဖူး၍မ၀နိုင်အောင်ပင်။ မြတ်စွာဘု၇ားဧ။် စွယ်တော် အစစ်ဖြစ်၍
ဆုတောင်းမိသည်ကတော့ သံသရာဝဋ် ဒုက္ခတို့ မှ ကျွတ်လွန်ရာမှန် ။မြတ်နိဗ္ဗာန်မှလွဲ၍
အခြားဘာမှ မရှိတော့ ပါ။် ကြာကြာရပ်၍ ဖူးမျော်နေရန် မသင့် သောကြောင့် ခပ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လှမ်းကာ ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်ဘုရားဧ။်ေ၇ှ့ မှောက်တွင် အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ကာဖူးမြော်မှ သာ အားပါးတ၇ ဖူးမြော်၇သည်မှာ စိတ်အေးချမ်းမှုကို အထူးခံစားရ၍ ဗုဒ္ဓကိုယ်စား ရည်မှန်းကာ ကုသိုလ်ပွား၍ ဖူးမ၀နိုင် အောင် ပင်။ဖူးမြော်ပြီး ရွှေကျောင်းကြီးမှအောက်သို့အဆင်းမှာတော ကြည်ညို ဖွယ်၇ာမြတ်စွယ်တော်ပုံ ပါသော ပြက္ခဒိန် တခု ကို တထောင်ကျပ် ဖြင့် ဝယ်ယူပူဇော်ခဲ့ ပါတယ်။စွယ်တော်စံပါယ်ရာေ၇ွှကျောင်းကြီးနှင့်စွယ်တော်ကိုသယ်ဆောင်လာသော က၇၀ိတ်ပုံကားပါသော တီရှပ်တတည် ကို လည်း အမှတ်တရ ၀ယ်ယူပူဇော်ခဲ့ ပါတယ်။
အနှစ်သက်ဆုံး ကတော့ စာအုပ်တွေပါဘဲ ။တာဝန်ရှိသူများေ၇ာင်းချပေးနေသော တရားစာအုပ်အမျိုးမျိုးနှင့် စွယ်တော် သမိုင်းပြည့် ပြ ည့် စုံစုံ သိလိုနေခိုက် တွေလိုက့် ရတာ ကတော့ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးပင်။
**** မြတ်စွယ်တော် သမိုင်း စုံလင် စွာေ၇းသားထားသည့်လုတိုင်း ဖတ်သင့်သည့်စာအုပ်*****
(ရှေ့ ဘက် အဖုံးနှင့်နောက်ကျောဖုံး)
**ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ဧ။် သမိုင်းကြောင်းကို အသေးစိတ်ေ၇းသားဖော်ပြထားသော ဓမ္မဒါန ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ငယ် **
အပြင် မှာအလွယ်တကူရှာတွေ့ နိုင် ဖို့ ခဲ ယဉ်းသော စွယ်တော် သမိုင်းကြောင်းစာအုပ်တွေ ကို ၀မ်းသာအားရ ၀ယ်ယူပူဇော်မိပါတယ်။
ထို့ ထက်မက ဂေဇက် အဖွဲ့ သားများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်မိတာကလည်း စိတ်ထဲမှာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ပင်။
မန္တလေးနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်
ယခု မန္တလေး ၌ကြွေ၇ာက်နေသည့်မြတ်စွယ်တော်သည်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘု၇ားဧ။် စွယ်တော် အစစ်ဖြစ်၍ မိမိစိတ်အာရုံ၌ မြတ်စွာဘုရားဧ။် အသွင် ကို ထင်အောင် ရှုပြီး မြတ်စွာဘု၇ားဧ။် ဂုဏ်တော်ကို အာရုံ ပြု ကာ မြတ်ဗုဒ္ဓဧ။် ဓာတ်တော်မွေတော်စစ်စွယ်တော်မြတ်အား ပူဇော်အဓိဠာန်ဝင်သော် မျက်မှောက် ဘ၀၌လည်း အကျိုးထူးများခံစားရရှိနိုင်သည်။ နောင် တမလွန် ဘ၀၌လည်း နတ်ရွာ သုဂတိသို့ေ၇ာက်ရှိကာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်မည်ဖြစ်၍
ယခု မန္တလေး ၌ကြွေ၇ာက်နေသည့် 
ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် အား အခါမလင့် သွားရောက် ဖူးမြော်ပူဇော်အပ်လှပေကြောင်း
မန္တလေး ဂေဇက် အဇွဲ့ သားများနှင့် မြန်ပြည်သူ အားလုံး အားတိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
****စွယ်တော် ဦးခိုက် ပြီး အပြန် အနောက်ဘက် ဘု၇ားပေါက်မှ ထွက် ခွာလာသော ဘုရားဖူးများ*****
******* ပျားပန်းခပ် မျှ စည်ကားလှ စွယ်တော် ဦးခိုက် ကြသူ များ ဧ။် အပြန်ခရီး **********
****** လာသူ ၊ ပြန်သူ ကုသိုလ်ယူ
မန္တလေးမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်******
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော ၊ သွားရောက် ဖူးမျှော်လိုက်ပါဦးမယ်
အသိလင်မယား သွားဖူးတုန်းကတော့ ၊ အိမ်ကို နှစ်ခေါက်ပြန်ရတယ် တဲ့
ပထမ အခေါက်က မျက်မှန်ပါသွားလို့ တဲ့ ၊ ဒုတိယအခေါက် က ဘောင်းဘီနဲ့ မို့ တဲ့
အင်းနော်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တော့မပြုပဲ ဓာတ်ပုံတွေတော့ ရိုက်ပြီးရောင်းခွင့်တော့လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ မန်းလေးမှာလည်း အရမ်းလူများလားဟင်။
ရန်ကုန်မှာတုန်းကတော့ စွယ်တော်လာဖူးသူတွေရဲ့ အိတ်တွေ ထီးတွေ အသုံးအဆောင်တွေကို အ၀င်နားက အအေးရောင်း ချိုချဉ်ရောင်းတဲ့ ယာယီဆိုင်လေးတွေမှာ အပ်ခဲ့ရတယ်။ ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို အပ်ခ ငါးရာပေးရလို့ မတန်တဆဖြစ်တာထက် တန်ဘိုးရှိပစ္စည်းတွေကို ဘာအာမခံချက်မှမရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ထားခဲ့ရတာ တော်တော် နောက်ဆံတင်းစရာ စိတ်မဖြောင့်စရာပေါ့။
ဒါစီမံသူတွေရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်ပဲ။ စွယ်တော်တော့ လာဖူးချင်ဖူး- ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင် မင့်ကံပဲ…လို့ သဘောထားရာရောက်တယ်။ ညံ့လိုက်တဲ့ သဘောထားမျိုးပဲ။ လူတွေကို စေတနာမပါခဲ့တာ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတော့ ဒီကော်မတီဝင်လူကြီးမင်းများအပါအ၀င် လူတွေ တုံးသထက်တုံးကုန်ပြီ။
ကျုပ်သာ ၀င်စီမံခွင့်ရရင် လုပ်အားပေးလူငယ်လေး ဆယ်ယောက်လောက်ခေါ်ပြီး ဒီကိစ္စကို ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာရတာထက်ပိုမခက်အောင် အသာလေးမျက်စိမှိတ်လုပ်ပေး စီမံပေးလို့ရတယ်။
ဒီပုံတွေထဲကြည့်ရတာ မန္တလေးမှာက ရန်ကုန်ထက် ပိုအဆင်ပြေမယ့်ပုံရှိတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကို ပေ နဲ့ ကို ပါလေရာ ရှင့် …
နေပြည်တော်မှာတုန်းကပို ကောင်းတဲ့ တချက်က ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လက်ခံပေးတဲ့ နေရာတခု ကို ထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘု၇ားဖူးတွေ စိတ်ဖြောင့် လက်ဖြောင့် ဖူးနိုင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ဘောင်းဘီ ၊စကတ် ၀တ်လာတဲ့(ကျား/မ) တွေကို လုံချ ည်တွေခေတ္တ ငှားပေးပြီး ဘုရားဖူးဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမယ့်နေပြည်တော် မှာ က လူက အတော်များတာမို့မန္တလေးလို အေးအေးဆေးဆေး ၇ပ်ပြီး ဖူးခွင့် မ၇ပါဘူး။
ဒီမှာ ဓာတ်ပုံတွေတော့ ရိုက်ခွင့် မပေးပေမယ့်အပြင်မှာ ရောင်းခွင့်တော့လုပ်ထားတဲ့အတွက်
နေပြည်တော်မှာ ထက် ပိုဝယ်ယူပူဇော်လို့၇တာပေါ့ ။ အဲဒါသိပ်ကောင်းပါတယ် …စာအုပ်တွေေ၇ာပေါ့ ။
လူကတော့ဒီမှာ ပုံမှန်ပါဘဲ။ရုံးပိတ်၇က်မှ ပိုများတယ်။
သတင်းအချက်အလက်တွေအပြင် ပုံတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ စွယ်တော်ကို ဖူးမြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ…
ခုလို ပုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် မဖူးမျှော်နိုင်တဲ့သူတွေ အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်
ကိုယ်တိုင် ဝင်ဖူးနေရသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်…
မန္တလာသူရေ … နှစ်ခေါက်တောင် သွားဖူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ … ကြားရသူတောင် ပျော်သလိုလိုဖြစ်သွားတယ် … ။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက တစ်ခေါက်သွားဖူးဖို့တောင် အနိုင်နိုင် …. လေးနာရီလောက်တန်းစီရတဲ့အဖြစ် … မစောင့်နိုင်လို့ လှည့်ပြန်သွားတဲ့အဖြစ် .. အမျိုးမျိုးသော အဖြစ်တွေနဲ့ … မဖူးလိုက်ရတဲ့လူတွေများပါတယ် … ။
ပြန်မကြွခင်တစ်ရက်က ကျွန်မတောင် စွယ်တော်ဖူးမလို့ …. မနက်လေးနာရီထဖြစ်တယ် …… ရေချိုး မနက်စာစားနဲ့ အိမ်ကထွက်တော့ ငါးနာရီဖြစ်နေပြီ .. ဟိုကိုရောက်တော့ ငါးနာရီခွဲ … အောင်မလေးလေး … လူတန်းကြီးများ နည်းတာမဟုတ်ဘူး … တမိုင်ခွဲလောက်ရှိမယ် … ။ အဲ့ဒီလိုသာ ရပ်စောင့်နေရလျှင်တော့ ညနေလောက်မှ ၀င်လို့ရမှာမို့ …. မစောင့်နိုင်လို့ … မအူမလည်နဲ့ .. ၀င်ပေါက်နားသွားရပ်နေလိုက်တယ် … ။
ဘုန်းကြီးတပါးကြွတဲ့နောက် ကပ်လိုက်ရင်း … အထဲကိုရောက်သွားပြီး … ဆယ်မိနစ်လောက် ဟိုတွန်း ဒီတိုက်နဲ့ … စွယ်တော်ဖူးခွင့်ရခဲ့တယ် ..ဒီတခါက နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖူးခွင့်ကြုံခြင်းပေါ့ … ။ တစ်ခါထက် တခါတော့ ၀င်ခွင့်ပိုကြပ်လာသလိုပဲ … ။
ဖိနပ်ကို မအပ်ပဲ ချွတ်ချင်သလို ချွတ်တော့ .. ဖိနပ်ပျောက်ခဲ့လေရော
ိုTrue Answer နဲ့ကို၇င်ေ၇ ……
ကိုယ်တိုင် မဖူးမျှော်နိုင်တဲ့သူတွေ အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်၇ွယ်တာေ၇ာ ၊ဒီမှာ ရှိပြီး မဖူးဖြစ်သေးတဲ့ လူတွေ အတွက်ပါရည်၇ွယ်ပါတယ်။
အမြင်မှန်မှန် နဲ့မြင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါဘဲ နော်။
မန္တလေး မှာ က ၇န်ကုန်မှာလောက် အချိန် အကြာကြီး တန်းမစီ ၇လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စောင့် ဖို့ လူတယောက် ထားခဲ့ ၇လို့ အချိန် (၂)ဆ ကြာတာတော့ အမှန်ပါ။ ဖိနပ်တွေ အတွက် ကလည်းသေချာအခမဲ့ တိုကင်နဲ့ စနစ်တကျ လက်ခံပေးတာမို့ 
အ၇မ်းအဆင်ပြေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ ည(၉)နာရီ ထိ လူတိုင်း ဖူးခွင့် ၇တာမို့ ကိုယ် အားတဲ့ အချိန်လေး ပြေးသွား ဖူးကြတာပါဘဲ။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ သူကြီးရှင့် 
ကျွန် မ က နောက်ေ၇းမယ့်ပို့ စ်မှာ ဖော်ပြမှာ မို့ ဒီမှာ အသေးစိတ်မေ၇းလိုက် ၇တာပါ။
ဗုဒ္ဓဧ။်မြတ်စွယ်တော်ပုံ မှာ သာမာန်လူများဧ။် အံသွားနှင့်ဆင်တူပြီး အမြစ်မှာ သုံးခွ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဝမှာ ပြား၍ တစ်လက်မ ပတ်လည်ခန့် ရှိပါတယ်။ အရှည်မှာ နှစ်လက်မခန့် ရှိ၍ လုံးပတ်မှာလည်း နှစ်လက်မခန့် ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၆ ရက်ကြာ အပူဇော်ခံခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို လာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများက ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးများစွာကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူသိမ်တော်ကြီး အတွင်း အပူဇော်ခံခဲ့သည့် အဆိုပါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်မှာ ယခုအခါ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ ဆက်လက်အပူဇော်ခံရန်အတွက် ယခုလ ၈ ရက်က မြန်မာ့လေကြောင်း အထူးလေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ ပင့်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၆ ရက်ကြာ အပူဇော်ခံခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်တွင် ကျပ် ၁၅၀၈၁၆၈၉၈၆ နှင့် ကန်ဒေါ်လာ ၇၃၇၉၉ အပါအဝင် အက်ဖ်အီးစီ ၃၇၈၉၊ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာမျိုးစုံ ၈၃၇၇ ခု (ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ၁၀၄၉၆၀၀၆၀၀) ကို ရရှိခဲ့ရုံ သာမက နိုင်ငံပေါင်း ၅၈ နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော ငွေကြေးများစွာလည်း အလှူခံရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ကျပ် ၄၀၀၃၃၇၂၅၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကျပ် ၁၂၂၇၀၀၈၀ နှင့် အခြားဝန်ထမ်းများစွာကလည်း အလှူငွေများစွာကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အလှူငွေ နဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေမှာ နေပြည်တော် နှင့် မန္တလေးမြို့ က အလှူငွေတွေ မပါသေးပါ။
မြန်မာလူမျိူးတွေ ရဲ့လှူဒါန်းပုံမှာ လွဲမှားနေသည်ဟု ယူဆပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း / စာသင်တိုက်များ ၊ လူအိုရုံ ၊ စာသင်ကျောင်း နဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနများကို လှူဒါန်း ပါက ပိုမိုအကျိူးပြုနိုင်ပါသည်။ အခုလှူဒါန်းလိုက်သည့် ရွှေ ၊ ငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ဘယ်သူရမည့် လည်းလို့ စဉ်းစားကြည့်ပါက တရုတ်နိုင်ငံ က ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ပြပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ချွေးနဲစာကို ရယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုရှိတာကတော့ ဓာတုစေတီဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့
အလှူပေးသူရဲ့ သဒ္ဓါရယ် အလှူကိုလက်ခံရရှိတဲ့ ဓာတုစေတီရယ် ကြားမှာ
ကိုယ်က မစ္ဆရိယစိတ်မထားဘို့က တော်တော်အရေးကြီးမယ် ထင်တာဘဲ ( အထင် )
ဒီကြားမှာ ပြောရခက်နေတာက ဘုရားဒါယကာလို့ဆိုနိုင်မလား
ဘုရားကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးတာတော့ သိပ်ဘဝင်မကျမိပါဘူး
မဆီမဆိုင် ဟိုးအနော်ရထာခေတ်ကို သတိရမိပါရဲ့
ဘုရားသာသနာ လာပင့်တာကို ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က
ဆိုတော့ကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတုတော်ဘဲနော
သတ္တဝါတွေ လိုအပ်သလို ကြည်ညိုပါစေပေါ့
ခုဟာက လူတွေကိုတော့ မှတ်တမ်းတင်ခွင့်မပေးဘူး
မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတုတော်တွေကို ရုံသွင်းစားသလိုတောင်
အင်းအင်းအင်း ပြောရရင်တော့ အောလပုံဘဲ
ဦး ဘဇင်းရှင့် 
ဟုတ်ပါတယ်။ဦး ဘဇင်းပြောသလို ပါဘဲ။ သဒ္ဒါလွန်တော့ စွန့်။ပညာလွန်တော့ ကွန့်ဆိုတဲ့အတိုင်း လှူ တန်းတဲ့ နေ၇ာမှာ လူ အမျိုးမျိုးရဲ့စရိုက်အလိုက် ညှိနိုင်း၇ အတော် ခက် မယ်ထင်ပါတယ်။
ဘုရားကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးတာတော့ IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သ၇ီရ ဓာတ်တော် စွယ်တော် အစစ်ရဲ့ လုံခြုံရေး အတွက် တားမြစ်ထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။မသမာသူတွေ ဆို တာ နေ၇ာတိုင်းမှာ ၇ှိနိုင်တာမို့ ကြိုတင်ပြီး ကာကွယ်ထားတဲ သဘောဖြစ်မှာပါ ၊့ဘက်စုံမွန်းမံစရိတ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံရောင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထဲ မှာလှူတဲ့ သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးတာပါ။ အလှူငွေ အနဲ အများ အလိုက်ပေါ့ ။အပြင် မှာက လက်ပွေ့ ဈေးသည်တွေ က သူတို့ ဘာသာသူတို့ ပုံတွေ ကော်ပီ ကူးပြီး (၂)ပုံ မှ (၅၀၀)ကျပ်နဲ့ ဈေးချိူချိူနဲ့ သူတို့ ဝမ်းစာ အတွက် သူတို့အလု အယက်ေ၇ာင်းကြ၇၇ှာတာပါ။ အဲဒါကို တာဝန်၇ှိသူတွေက နားလည် ခွင့် ပြုပေးထားတာပါ။နားလည်မှု လွဲသွား၇င် ကျွန်မ တင်ပြတာ လိုသွားလို့ ထင်ပါတယ်။
လူအချို့ရဲ့လှူဒါန်းပုံမှာ လွဲမှားနေတာ ကတော့ နေရာ အများအပြားမှာပါ။ ကိုနေမင်းစေတနာနဲ့ ပြော သလို မှန်ကန်တဲ့ နေ၇ာမှာ အကျိုးရှိရှိ လှုဒါန်းတတ်ဖို့ ဆိုတာတော့ တကယ်လို အပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ၇ဲ့သဒ္ဒါစိတ်က နဂို ကတည်းက ထက်သန်ပြီးသားဖြစ်လို့ 
လှုဒါန်းတဲ့ နေ၇ာ မှာ စိတ်ပြတ်မှသာ အဲ ဒီ အလှူ က ဒါနမြောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့သိထားကြတာမို့ 
ဒီနေရာမှာ ကိုနေမင်းတွေးသလို
အခုလှူဒါန်းလိုက်သည့် ရွှေ ၊ ငွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ဘယ်သူရမည့် လည်းလို့စဉ်းစားကြည့် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘု၇ား၇ှင်ရဲ့ အသမ္ဘိ န္န သရီ၇ ဓာတ်တော် ကို ရည် စူးပြီးလှူဒါန်းပူဇော်ကြတာပါ။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ လှူခဲ့ တာပါဘဲ။ဘယ်နေမှာဘဲ သုံးသုံး၊ ဘယ်လိုဘဲ သုံးသုံးပေါ့ ။ သဒ္ဒါအားကောင်းတဲ့ လူနဲ့ ပညာ အားကောင်းတဲ့လူ (၂)ဦး က ရှုမြင် ပုံတွေ မတူညီနိုင် ကြပါဘူး။
အင်း… ကျွန်တော်လဲ အလှူငွေ ကိစ္စကို တော်တော်တွေးဖြစ်တယ်.. အဲ့ဒီ ငွေတွေက တရုတ်ကယူသွားမှာလား… မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ကျန်ခဲ့မှာလား
တရုတ်ကယူသွားမှာဆိုရင်ကော… တရုတ်က အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဘာလုပ်မှာလဲ..
မြစ်ဆုံကိစ္စကလဲ လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ထားတာဆိုတော့ အဲ့ဒီအတွက် လျော်ကြေးများလား…. ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေကို တစ်ခါတစ်လေမှာ ဥာဏ်နည်းတယ်လို့ ဝေဖန်ချင်တယ်…
တရုတ်ပြည်က စွယ်တော်ကို လှူမယ့်အစား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ယိုင်နဲ့ ပြိုပျက်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကပ်သပ်ပြီး သီတင်းသုံးနေရတဲ့ သံဃာတော်တွေ အများကြီးပါ….
နာမည်ကြီးပြီး တရားစခန်းတွေ အများကြီး ဖွင့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးကို ဟီး ထအောင်ဆောက်ပြီး နေနိုင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေကို လှူမယ့်အစား မိဘမဲ့ ကလေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက် ပညာသင်ပေးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို လှူတန်းတာက ပိုမိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်…
ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားမှုနည်းတဲ့ တိုင်းနယ် ပြည်နယ်တွေမှာ ဘာသာပြန့်ပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေ သီတင်းသုံးဖို့ ကျောင်းတိုက်တွေ စေတီတွေ အခြေခံ အသုံးအဆောင်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်.. အခု စွယ်တော်မှာ လှူလိုက်တဲ့ငွေ ပမာဏက အခြားသော လူမှုလုပ်ငန်းတွေ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပါတယ်…
ဟုတ်ပါတယ် ကို ဒေးေ၇
အမှန်တကယ် ကို အဲဒီနေ၇ာတွေ က လို အပ်နေကြတာပါ။
လှူတဲ့ လူတွေလဲ ရှိပါရဲ့ ……ဒါပေမယ့် 
လူမှုေ၇း အတွက် လိုတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ က အမြဲ လို အပ်နေတာဆို တော့ ……
မြန်မာလူမျိူးတွေကလဲ ကိုယ်နိုင် သလောက်ပေါ့ …..လှူတော့ လှူနေကြတာပါဘဲ။